Fikarohana momba ny firaisana Olana iray momba ny fiainana taloha tampoka: Zazalahy iray no mahita ny vady andavanandriny taloha sy ny harena ao aminy - fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fahatsiarovana hafahafa eo amin'ny fahazazana
Mpikaroka: Krishnanand ary Ian Stevenson, MD
From: Unlearned Language, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Reincarnation & Fiarovana ny fiainana manokana taloha ao anatin'ny fanahy
Amin'ny tranga xenoglossy, matetika no hita fa ny fiainana taloha dia mampiseho tanteraka, raha tsy fantatry ny toetra taloha fa maty izy. Ireo karazana tranga ireo dia manaporofo fa ny fanahy dia afaka mitazona toetra amam-piainana taloha ao anatiny.
Na dia tsy misy xenoglossy aza ity tranga manaraka ity dia mampiseho izany hoe ahoana no hisehoan'ny toetran'ny fiainana taloha. Ny mpikaroka voalohany izay namoaka ity raharaha ity dia nomena anarana hoe Krishanand.
Ankizilahy iray mahita ny làlana mankany amin'ny fonenany taloha sy ny vadiny
Amin'ity tranga ity, nisy zazalahy tampotampoka tampoka ary tsy nampoizina ny niaina ny fiainan'ny lehilahy iray tao amin'ny tanàna akaiky iray. Nolazain'ilay zaza tamin'ny ray aman-dreniny ny toerana niainany taloha. Rehefa nentin'ireo ray aman-dreniny ho any amin'ilay tanàna nantsoiny ilay zaza, dia tonga tany amin'ny fonenany taloha ilay zaza ary nahafantatra vehivavy nipetraka tao izy ho vadiny.
Rehefa avy nahita ny tokantranony sy ny vadiny avy tamin'ny nahalany azy taloha, dia nilaza tamin'ity vehivavy ity ireo antsipirihany manokana momba ny fiainany miaraka, izay nohamafisiny ho marina. Nolazain'ilay zazalahy tamin'ilay vehivavy nandevenany vola ilay zazalahy avy eo. Narahiny ny baikon'ilay tovolahy ary nahita tokoa ilay vola.
Raha mbola tao an-tranon'ny vehivavy ilay zazalahy sy ny ray aman-dreniny dia nivoaka tampoka tamin'ity androm-piainana teo aloha ity izy ary gaga raha nahita ny tenany tao an-trano tsy nahazatra loatra. Tsy nisy tohiny intsony.
Ny fanahy mihazona maha-olona: Raha ekena io raharaha io dia mampiseho hoe ahoana no azo arovana ao anatin'ny fanahy ny toetran'ny olona taloha, izay mety mivoaka avy eo. Ireo karazana tranga ireo dia tsy mitovy amin'ny tranga reincarnation hafa satria toa tsy mifankahalala ny olona taloha. Ny fiarovana ny maha-olona ao anaty fanahy dia resahina ao amin'ny fizarana, Soul Evolution.
Fahatsiarovana jeografika: Tamin'ity raharaha ity dia afaka nitady tamim-potoana tany amin'ny fonenany taloha ilay zazalahy, ary koa ny toerana nandevenany vola.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nihaona tamin'ny vadiny taloha ny zazalahy tamin'ity raharaha ity.